Ezigbo akụkọ banyere ịmepụta intaneti n'ime ụwa | ECommerce ozi ọma
Akụkọ ihe mere eme na ịntanetị
O yikarịrị ka oge ụfọdụ na ọrụ anyị na-arụ kwa ụbọchị anyị ga-ajụ onwe anyị ajụjụ nke ga-abata n'uche n'oge na-adịghị anya. "Kedu ihe ndụ m ga - abụ ma ọ bụrụ na enweghị teknụzụ nke dị taa?"
Ọ na-esikarịrị anyị ike ịkwụsị iche na ịtụgharị uche n'ụdị echiche ndị a, n'ihi na anyị bịara ụwa ebe ihe ndị anyị na-eji kwa ụbọchị dị adị, na n'ihi nke ahụ ọ bụ ihe nkịtị na anyị ewere ihe niile maka nyere. ngwa na ngwa ndi n’eme ka ndu anyi di nfe karịa otu ọ dịịrị ndị nna nna anyị ha.
Kaosiladị, mgbe ịkwụsịtụ iche maka ihe niile ahụ teknụzụ nke na-adịghị adị afọ ole na ole gara aga, ma ọ bụ na ihe ndị ahụ mepụtara na-enweghị nke ịdị adị ga-abụ ihe a na-apụghị ichetụ n'echiche, ọ bụ mgbe anyị nwere ike ịchọpụta nnukwu uru anyị nwere na ọgbọ ndị gara aga, uru ndị anyị na-anaghị enye nnukwu mkpa n'ihi na ha bụ naanị ihe anyị ji akpọrọ ihe na ndụ anyị. , na Mgbe oge mbụ anyị ghọtara na ha enweghị, ọ bụ n'ihi na anyị na-atụfu ha na mberede.
Dịka ọmụmaatụ, ọnọdụ ndị dị ka nkwụsị ọkụ, mgbaàmà mgbaàmà USB ma ọ bụ eziokwu nke gas na mberede, bụ ihe ngosi nke anyị na-anwa izere na-akwụ ụgwọ niile, n'ihi na anyị enweghị ike ichetụ n'echiche ndụ na-enweghị nkasi obi ndị ahụ niile, mana mgbe ọnọdụ mberede nke ọkụ eletrik ma ọ bụ mmiri ọkụ na-apụ, ọ na-echetara anyị na anyi bi n’oge oganihu nke ndị ọgbọ ole na ole gara aga enweghị.
1 Ọnụnọ nke ịntanetị na ndụ anyị
2 Mgbọrọgwụ nke ịntanetị
3 Usoro TCP: ọkpụkpụ nke usoro kọmputa kọmputa taa
4 Ubochi omumu WWW
5 Intanet taa
Ọnụnọ nke ịntanetị na ndụ anyị
Kpọmkwem otu n'ime ihe ndị kasị mgbanwe mepụtara na ọtụtụ mmadụ anaghị eji oge ugbu a, ya bụ, na ọ gbanyere mkpọrọgwụ na ndụ anyị na oge ụfọdụ mmadụ na-eche na ọ ga-adịrịrị ebe ahụ, ọ bụ ịntanetị, nke otu akụkụ buru ibu nke ndị ọrụ ya abụrụla ihe mgbakwunye na ahụ mmadụ.
Ma ọ bụ ya ịntanetị agbanweela ndụ anyị nke ukwuu na mgbe anyị kwụsịrị iche echiche banyere mmalite ya, ọ ga-abụ ihe na-agaghị ekwe omume anyị ịghọta na maka imirikiti n'ime anyị na-eji ngwa ọrụ a dị egwu, anyị bụ ọgbọ mbụ nke ndị ọrụ hụrụ ka ọ rutere, ya bụ, maka ọtụtụ n'ime anyị , Anyị amadịghị banyere ịntanetị n'oge nwatakịrị anyị kachasị dịpụrụ adịpụ, n'ihi na ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-eto eto taa toro site n'iji ngwá ọrụ a na kọmputa na ndụ ha.
Ọtụtụ ndị ọzọ hụrụ ka nke a rutere ihe omuma ohuru mgbe anyị nwere afọ ole na ole site na iji usoro nyocha a na-ahụkarị iji nweta ọrụ nke izu ahụ, dị ka ihe eji eme ihe nke ukwuu iji mee nchịkọta nke ha jụrụ anyị n'ụlọ akwụkwọ.
Taa, nke ahụ abụkwaghị nsogbu nye ụmụaka taa, n'ihi na ha nwere nke ha dị ukwuu Wikipedia. Otú ọ dị, maka ọtụtụ ndị toro eto ugbu a, ihe adịghị adị mfe mgbe niile, n'ihi na ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na World Wide Web amụrụ na 1991, ya bụ, ihe dịka afọ iri abụọ na asaa gara aga, nke ahụ pụtara na mmadụ niile nwere opekata mpe ihe karịrị afọ iri anọ nke ndụ, amataghị ịntanetị na afọ iri mbụ ha nwere ike ghara ịbụ nke na-esote, n'ihi na mgbe ịntanetị amụrụ, o were afọ ole na ole ka ọ bụrụ nnukwu netwọkụ zuru ụwa ọnụ nke anyị maara taa ma jiri kwa ụbọchị, dị ka ihe dị oke mkpa nke agụmakwụkwọ anyị, ndụ ọkachamara na ọbụnadị dịka akụkụ nke oge ezumike anyị kwa ụbọchị.
Hasntanetị nwere ebe dị nchebe n'akụkụ ọ bụla nke ịdị adị anyị, ma anyị enweghị ike iche echiche banyere otu anyị ga-esi ebi ma ọ bụrụ na anyị efunahụ ngwa ọrụ a, obere oge ọ dị afọ 27, na mberede. Ọ bụ ya mere anyị ga-eji nyochaa nkenke oge ahụ Internet akụkọ ihe mere eme na mmepe nke o gosiputara n'oge na-aga, iji ghọta mmetụta ya nwere na anyị ma tụgharịa uche n'otú ihe ọhụụ a siri bụrụ, dịka mgbanwe teknụzụ na ọdịnala n'akụkọ ihe mere eme nke mmadụ.
Mgbọrọgwụ nke ịntanetị
Site na ihe ekwuru n'elu, n'ezie otutu mmadu gha eche na intaneti esiteghi ebe obula 27 gara aga, na 1991. Kaosinadị, ụbọchị a kwekọrọ na ọmụmụ nke World Wide Web, nke anyị nwere ike ịghọta dị ka usoro bụ isi nke ihe ọrụ nkwukọrịta zuru ụwa ọnụ mejupụtara.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịlaghachi na ezi ihe mere eme nke hapụrụ ntọala nke mmepe nke ịntanetị, mgbe ahụ, anyị ga-agarịrị n'ihu na akụkọ ihe mere eme nke teknụzụ ozi. Nke a bụ otu anyị nwere ike isi ghọta nke ahụ ọmụmụ mbụ nke dugara na mmepe nke ịntanetị, Ha bidoro na ngwụcha Agha Worldwa nke Abụọ, n'ihi asọmpi na asọmpi siri ike nke mere n'oge Agha Nzuzo, n'etiti ndị ike nke United States na Soviet Union.
Na nkenke Isntanetị bụ nsonaazụ nke ọrụ agha, ebe ọ bụ na e guzobere usoro mbụ ya na 60s., n'ihi na ọ dị mkpa ka United States mepụta nanị netwọk ozi agha, nke ga-enye ohere, na mwakpo ọgụ Russia, ịnweta ozi dị mkpa iji meghachi omume na mwakpo ahụ site na ebe ọ bụla na mba ahụ.
Ọ dị ka nke a, dịka ọ gasịrị ọtụtụ ọganihu na mgbanwe na nke a, bịara n'ụwa, na 1969, netwọk mara dị ka ARPANET, usoro nke nwere ihe dị ka kọmputa anọ dị na mahadum dị iche iche na mba ahụ. Ihe ịga nke ọma nke atụmatụ a buru ibu nke na naanị afọ abụọ mgbe nke ahụ gasịrị, e nweelarị kọmputa 40 jikọtara onwe ha, na-ekerịta ozi sitere n'akụkụ dị iche iche nke mba ahụ.
Usoro TCP: ọkpụkpụ nke usoro kọmputa kọmputa taa
Obere oge mgbe njikọ mbụ nke kọmputa, na nọ na mahadum dị iche iche na United States, ọganihu ọhụrụ n'echiche a rutere, nke mechara bụrụ isi maka mmụba nke netwọk kọmputa, nke a na-akpọ protocol TCP.
Usoro nnyefe nnyefe, Maka mkpirisi okwu ya na Bekee TCP (Protocol Control Protocol) e mere n'etiti 1973 na 1974 site n'aka ndị nyocha Vint Cerf na Robert Kahn, ma nwee ihu ọma nke netwọkụ njem nke ọtụtụ njikọ na data data, ya bụ, izipu na mbugharị nke ndị a n'enweghị nsogbu.
Mkpa nke teknụzụ a dị na eziokwu ahụ ọ gara n'ihu ruo taa dịka usoro nhazi maka ikesa ozi n'etiti komputa, ruo n'ókè nke ihe owuwu a na-akwado ngwa ndị kasị ewu ewu na ịntanetị, yana Http, SMT, SSH na FTP ogbugba ndu.
N'okwu dị mfe, anyị nwere ike ịsị na usoro iwu a na-arụ ọrụ dị ka ihe owuwu kọmputa nke na-eme ka o kwe anyị omume iziga na nata data n'ime gigantic global network network, nke mere ya okpukpu nke intaneti.
Ubochi omumu WWW
Nke na-esote nnukwu mmalite nke netwọk kọmputa zuru ụwa ọnụ ga-abịa ọtụtụ afọ mgbe nke ahụ gasịrị, ruo 1983, mgbe Ngalaba Nchebe United States kpebiri ịgbanwe na iji nke Usoro TCP / IP na netwọkụ nke ya a na - akpọ Arpanet, na-eke dị ka a na-akpọ netwọk ọhụrụ Ntanetị Intaneti Arpa, na n'ime afọ ndị a ga - amata naanị "Internet".
Ka ọ na-erule afọ 1985, nke a bụ teknụzụ ọhụrụ etinyere kpamkpam na kọmputa kọmputa, ọ bụ ezie na ọ bụ naanị ndị ọkachamara n'ọhịa maara. Nzọụkwụ ikpeazụ maka ịntanetị n'ikpeazụ ịmalite iru ụlọ nke ọtụtụ nde mmadụ gburugburu ụwa ga-abụ okike nke World Wide Web, nke mere n'oge na-adịghị anya mgbe nke ahụ gasịrị.
Na 1990, Tim Berners nke European Center for Nuclear Research (CERN) duziri nyocha na a sistemụ na-enye ohere ịchekwa data na weghachite. Ọrụ ya kwụrụ ụgwọ, na -emepụta na 1991 "World Wide Web" (WWW) site na iji ngwa egwu atọ: HTML, TPP na mmemme a na-akpọ Nchọgharị Weebụ.
Mgbe ọ nwalechara arụmọrụ nke netwọkụ kọmputa, emepere ya ka ọha mmadụ jiri ya rụọ ọrụ na 1993, site na nyocha ọchụchọ mbụ n'akụkọ ihe mere eme, Wandex nke jere ozi dị ka ndeksi nke ibe weebụ, ebe ọ bụ na e bu ụzọ kee ya, enwere ike ịhazi akwụkwọ ndị a mfe amata.
Ọ bụ n'ihi nke a ka a na - ejikọkarị Tim Berners dị ka nna nke Weebụ, ahịrịokwu nwere ike bụrụ ntakịrị ikwubiga okwu ókè, ebe ọ na - ewepụ otuto na ọmụmụ ihe niile gara aga, nke ndị nyocha na ndị ọkà mmụta sayensị mere na ọkara nke abụọ nke narị afọ nke XX, yabụ Tim Berners nwere ike ịnwe ngwaọrụ ndị nyere ya aka ma ọ bụ tinye brik ikpeazụ na ikpeazụ na-ewu nke internet.
Wasntanetị abụghị ọrụ dị mfe, na ọ bataghị n'ime ndụ anyị n'otu ntabi anya, ebe ọ bụ na site na usoro mbụ ya ruo na ngwụcha ya nke ikpeazụ, o were ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara narị afọ. Mara data ndị a na-enye anyị ntuziaka ka anyị nwee ike ịrụ ọrụ karị na otu n'ime onyinye kachasị ukwuu nke amamihe mmadụ nyere anyị. Ọ dị anyị n'aka iji mma agha a nwere ihu abụọ mee ka ọ bụrụ ngwaọrụ ọzọ nke ọrụ na mmepe anyị na ọ bụghị naanị ihe eji atụrụ ndụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Akụkọ ihe mere eme na ịntanetị
Njuputa mmadu, uzo kacha mma iji kwado oru anyi
Mepụta blog gị abụghịzi nsogbu akụ na ụba